Vhiki Karenda, yemahara kwenguva yakatarwa | IPhone nhau
Vhiki Karenda, yemahara kwenguva shoma
Pane ese maficha atinogona kuwana natively muIOS, Karenda neMeyili zvagara zviri izvo zvinoramba zvichisiya chimwe chinhu chisingadiwe kune avo vashandisi vanoda chimwe chinhu kupfuura chishandiso chiri nyore chinotiyeuchidza patinofanira kutora piritsi, izvo zvavanoita vedu vatinofarira akateedzana kana kutarisa kuti mangani maemail ekushambadzira atakatambira zuva rese. Dzimwe nzira dzekushandisa kweMail muApp Store tinogona kuwana nhamba hombe pamwe nemaapplication anotibvumidza isu kubata maneja pakarenda yedu. Nhasi tinotaura nezvazvo Vhiki Karenda, chishandiso chinotibvumidza isu kushandisa kalendari yedu neimwe nzira kunyangwe isu tichitaura nezve zvinoonekwa kana zvinoita chinhu, kwatichawana yakawanda nhamba yesarudzo.
Vhiki Karenda ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye2,99 euros, asi kwenguva yakati rebei tinogona kuikanda pasina muripo.
Vhiki Karenda maficha
Kubvira kwekubatanidza dhata kumisangano
General rondedzero kwaunogona kuona ese madomendi uye zviitiko
Kugadzirisazve kugadzwa uye zviitiko zviri nyore sekukweva uye kudonha kune iro raunoda zuva.
Karenda yekutarisa nezuva, vhiki, mwedzi uye gore
Batch mashandiro ekuchengetedza nguva.
Mifananidzo dzakasiyana dzezviitiko zvakasiyana
Inoenderana neApple & Google Mepu, Citymapper, Garmin, Moovit, Pano, iGo, Mepu.me, Tom Tom, Navigon, Sygic, TransitApp, Waze, Yandex
Wedzera zviitiko nekukurumidza neiyo 3D Kubata chimiro.
Mikana yekuswededza mukati kuti uswedere padyo nemazuva nekugadzwa uye zviitiko.
Mikana yekubatanidza kutaurirana nezviitiko zvatakatoronga kare.
Inoenderana nekutaridzika kwenzvimbo.
Yepamberi mitambo yekudzokorora
Widget yenzvimbo yekuzivisa.
Zadzisa magadzirirwo ezviitiko
Kugona kuvanza kupera kwevhiki kana pasina nguva / mazuva evhiki / kana asina kutendeuka
Vhiki Karenda ine akati wandei mukati me-zvekutenga zvekutenga nazvo izvo zvatinogona kuwedzera mazororo uye imwewo karenda (parizvino iri yechinyakare) pane mashejuru enhabvu nemazuva ebhasikiti. Asi kuti uwane iyo ruzivo hapana chikonzero chekutenga, nekuti kana tikatsvaga zvishoma tinogona kuzviwana online uye nekuzviwedzera zvakananga kune yedu iPhone, iPad kana Mac muchimiro chekarenda nyowani.
WeekCalendar - Cloud Calendarvakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Vhiki Karenda, yemahara kwenguva shoma
20 Mitambo uye kunyorera mahara kwenguva yakati wandei (Ndira 5)
Iyi Anwendung yaizotibvumidza kuti tiwane iyo AirPods kana isu takairasa